बेइजिङसँग कसिलो हात मिलाउन काठमाडौँ (केपी ओली) चुक्नु हुन्न| Nepal Pati
- महेन्द्र पाण्डे, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
नेपाल–चीन छिमेकी मात्रै होइन घनिष्ट मित्र पनि हुन् । दुइटै सार्वभौम देश हुन । बीचमा केही समस्या देखिएको छ । तर सधै सम्बन्ध नयाँ ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन जाँदा नेपाल अप्ठ्यारोमा थियो । त्यस बेला चीनले सहयोग गरेको थियो । अहिले परिस्थिति नयाँ छ । चीनले झन् सहयोग गर्नेछ । नेपालका लागि चीनले सहयोग पनि नयाँ स्तरमा गर्न खोजेको छ ।
तर, भएका सहयोग कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । यसअघि भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेमा यो पटकको भ्रमण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको दोष पनि छ । अब कार्यान्वयनका लागि साझा सयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्णय पनि लिइसकेको छ । आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा कमजोरी नहोला भन्ने मलाई विश्वास छ ।
चीनले नेपालमा अरु विकाससँगै रेलमा महत्व दिएको छ । चीनको रेल नेपालको सीमानामा आउन समय भने लाग्छ । यदि छिटो रेल ल्याउने हो भने रेलका लागि नै छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । रेल मात्रै होइन रेलसँगै कृषिको ब्यापारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि होइन भने रेल आयो भने पनि रित्तै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो बेला रेल चल्दैन । चीनका लागि के आवश्यक छ ? उसले के लिन्छ ? उर्जामा चीनलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? भन्नेमा विशेष अध्ययन भयो भने नेपाल र चीन नयां ढंगले जोडिन्छन् ।
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पनि बलियो बन्दै गएकाले हाम्रो सम्बन्धले अब एक अर्कालाई केही असर गर्दैन । कसको रेल पहिले आउने भन्ने दौड जस्तो देखिन्छ । त्यसमा लाग्नु हुन्न । योजना अनुसारनै रेल नेपालमा आउछन् । आउनुपर्छ ।
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका विषयमा यसपटक पनि निम्तो जादैछ । अब विस्तारै आउने वाताबरण बनेको छ । मेरो विचारमा यो बर्षमा नै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनेछन् । तर, बेजिङसँग कसिलो हात मिलाउन काठमाडौं चुक्नु हुन्न । त्यसो भयो भने मात्रै हात मिलाएर एकै साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हात कस्सिलो बनाउनुपर्छ ।